प्रधानमन्त्री कपको उपाधिसँगै पुलिसले जित्यो २० लाख | Sagarmatha TV
प्रधानमन्त्री कपको उपाधिसँगै पुलिसले जित्यो २० लाख
काठमाडौं । तेस्रो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गर्दै पुलिसलेे उपाधि हासिल गरेको हो।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज भएको फाइनलमा मञ्जित श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको पुलिसले विनोद भण्डारीले कप्तानी गरेको आर्मीलाई चार विकेटले पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कपमा पहिलो पटक उपाधि हासिल गर्न सफल भयो । उपाधिसँगै पुलिसले २० लाख नगद प्राप्त गरेको छ।
यसअघि दुई विभागीय टोली पुलिस र आर्मी प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा संयुक्त विजेता बनेको थिए। वर्षाका कारण फाइनल खेल रद्द भएपछि दुवैले ट्रफी बाडेका थिए । त्यस्तै दोस्रो संस्करणको प्रतियोगितामा पुलिस सेमिफाइनलमा पराजित भएको थियो भने आर्मी फाइनलमा अर्कोे विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबसँग पराजित भएको थियो।
प्रतियोगिताको तीनै संस्करणसम्मको खेलमा फाइनल पुगेको आर्मी उपाधिविहीन बन्यो। हारसँगै उपविजेतामा चित्त बुझाएको आर्मीले दश लाख नगद हात पारेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको आर्मीले पुलिसलाई १२६ रनको सामान्य लक्ष्य दिएको थियो। आर्मीले दिएको सहज लक्ष्य पुलिसले ४०.३ ओभरमा छ विकेट गुमाएर भेट् सफल भयो।
पुलिसको जीतमा अमित श्रेष्ठले ४० बल खेल्दै दुई छक्का र छ चौकाको मद्दतले सर्वाधिक ४४ रन बनाए। त्यसैगरी सुनिल धमालाले अविजित ४२ रन जोड्दा कप्तान मञ्जितले अविजित ११ रन जोडे। बलिङतर्फ आर्मीका करण केसीले व्यक्तिगत तीन विकेट लिए। त्यस्तै शाहव आलमले दुई विकेट लिँदा सुसन भारीले एक विकेट हात पारे।
त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीको शुरुआत उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि हार बेहोर्न बाध्य बन्यो। आर्मी ३३.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १२५ रनमा समेटियो । शुरुआती ब्याट्सम्यान सोमपाल कामी र राजु रिजालले पहिलो विकेटका लागि १५.५ ओभरमा ७२ रनको साझेदारी गर्दै ठूलो योगफलको सम्भावना देखाएका थिए। तर ललित नारायण राजवंशीले सोमपाललाई पवन सरार्फबाट क्याच आउट गर्दै ३५ रनमा पेभिलिएन फर्काएपछि आर्मीको खेलको स्तर खस्किएको थियो ।
सोमपालले ४० बल खेल्दै दुई छक्का र तीन चौकाको मद्दतमा ३५ रन बनाएका थिए। त्यस्तै राजु रिजालले ३२, भीम सार्कीले २० तथा रोहित पौडेलले १८ रन जोड्नुबाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन् । मध्यक्रमका कुनै पनि ब्याट्सम्यानले जिम्मेवार भएर नखेल्दा आर्मी सस्तैमा समेटिन पुगेको थियो। आर्मीलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा पुलिसका ललित राजवंशी र पवन शर्राफले समान चार/चार विकेट लिए भने सागर ढकालले एक विकेट हात पारे।
समूह चरणको खेलमा पनि पुलिसले आर्मीलाई ५० रनले पराजित गरेको थियो। त्यस्तै यस संस्करणको प्रतियोगितामा पुलिस र आर्मी एउटै समूहबाट फाइनलमा पुगेका थिए। समूह बी मा रहेको पुलिस समूह चरणमा अपराजित रहँदै सेमिफाइनल पुगेको थियो। पुलिसले सेमिफाइनलमा साविक विजेता एपिएफलाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। उता समूह चरणमा पुलिससँग मात्र हार बेहोरेको आर्मीले सेमिफाइनलमा प्रदेश नं ३ लाई ११७ रनले पराजित गरेको थियो।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप) को आयोजना तथा नेपालय इन्टरनेशनल प्रालिको सहकार्यमा भएको प्रतियोगिता यही जेठ १० गतेदेखि शुरु भएको थियो । प्रतियोगितामा तीन विभागीय टोली र सात प्रदेश गरी १० टोलीको सहभागिता थियो। समूह ए मा एपीएफ, प्रदेश ५, प्रदेश ३, सुदूरपश्चिम र गण्डकी थिए भने समूह बी मा त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, प्रदेश २, प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेश सहभागी थिए । रासस
राष्ट्रियता बचाउन कांग्रेसको योगदान महत्वपूर्ण : नेता पौडेल
सुदूरपश्चिमका आकर्षक गन्तव्यमा पर्यटक गएनन्
वैज्ञानिक खोज तथा अनुसनधानलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रपतिको सरकारलाई सुझाव
प्रचण्डले भने,‘सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैन’
म्याग्दीमा बाढीः दुई जना बेपत्ता, स्कूल बगायो चार घरमा क्षति
नेकपाले छान्यो ६ महानगरका अध्यक्ष र सचिव
पशुपतिनाथ मन्दिरको गेटमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु डिस्पोज
जनताले हेर्न नपाउने संविधान दिवसको कार्यक्रम किन ?
तस्वीरमा हेर्नुहोस संविधान दिवसको कार्यक्रम
देशको मूल कानून संविधान कार्यान्वयनयमा पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन : प्रधानमन्त्री
घरबेटीलाई बहाल कर तिराउने विषय विवादमा
मुलुकको उपलब्धी भत्काउने प्रयास भएकाे छ : प्रधानमन्त्री
बाँके घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न कांग्रेसको माग
नेपाल वायुसेवाले ज्येष्ठ नागरिकलाइ भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने
पहिरोमा पुरिएर काभ्रेमा एकजना बालकको मृत्यु
दाजुलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी आत्महत्या
दशैंमा कहाँ जान कति भाडा ?
एएफसी यु–१६ च्याम्पियनसिपः नेपाल र श्रीलंका खेल्दै
साफ यू–१८ फुटबल च्याम्पियनसिपमा आज नेपाल र भुटान भिड्दै
मुआब्जा तोक्न नसके क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गर्न बुढिगण्डकी पीडितको माग
९७ हजार नगदसहित १४ जुवाडे पक्राउ
जनताले ल्याएको संविधान भन्दामाथि कोही पनि छैनः पूर्वसभामुख नेम्वाङ
भक्तपुरको कपास उद्योगमा भीषण आगलागी